Iinkqubo Zovavanyo Lwekliniki Yasemayo
Yintoni iRetinitis Pigmentosa?
I-Retinitis pigmentosa (RP) sisifo samehlo. Kukhokelela ekuphulukaneni nombono ngokuthe ngcembe kwaye, ngamanye amaxesha, ukungaboni.
I-RP yenzeka xa iiseli zokujonga ukukhanya kwiliso zihla. Ezi seli, zibizwa ngokuba ziirandi kunye neekhowuni, zibekwe kwiretina. Le yinxalenye yangasemva yamehlo efumana ukukhanya okuza kwiliso, kwaye ithumela olo lwazi lubonakalayo kwingqondo.
Iimpawu ze-RP zihlala ziqala ebudaleni, nangona zinokuqala kubuntwana. Uninzi lwabantu abane-RP ngokusemthethweni aluboni kangangeminyaka engama-40, nangona besenombono othile. Inani elipheleleyo lokulahleka kombono kunye nokukhawuleza kwesi sifo sihluka ukusuka kumntu ukuya kumntu.
Akukho mntu waziyo kanye ukuba yintoni ebangela i-RP. Kukholelwa ukuba sisifo esizuzwe njengelifa. Nangona kunjalo, kwezinye iimeko, esi sifo sivela kubantu abangenayo imbali yosapho yesi sifo.
I-medrol dosepak 4 mg ithebhulethi yomlomo
Ukuphazamiseka nako kunokubonisa njengenxalenye yamanye ama-syndromes. Oku kubandakanya isifo seBassen-Kornzweig okanye isifo seKearns-Sayre.
Iimpawu zokuqala ze-RP zihlala zinciphisa umbono wobusuku. Kuya kusiba nzima ngakumbi ukubona kwiindawo ezikhanyayo okanye ezimnyama.
Abantu abane-RP nabo baphulukana ngokuthe ngcembe nombono (wecala) kunye nokubukhali okubonakalayo.
Ixesha elingaphezulu, ukuphazamiseka kukhokelela kumbono wetonela. Imiphetho engaphandle yombono imnyama, ishiya isangqa esinciphayo sombono embindini.
Ekugqibeleni, abantu abane-RP banokungaboni. Kodwa uninzi lwabantu abanale ngxaki bagcina umbono othile, naxa sele bekhulile.
Uya kufunyaniswa ngugqirha wamehlo. Lo ngugqirha ogxile kukuphazamiseka kwamehlo.
Ugqirha wamehlo angenza inani leemvavanyo zokuqonda isifo. Ugqirha uya kusebenzisa isixhobo esibizwa ngokuba yi-ophthalmoscope ukujonga ngaphakathi kweliso ngomfundi. Kwiliso eliqhelekileyo, ugqirha uza kubona indawo ebomvu okanye eorenji ebomvu ebizwa ngokuba yingxowa-mali. Kumntu one-RP, indawo yeorenji iya kuba neblack brown okanye emnyama.
Uvavanyo lwentsimi ebonakalayo lunokwenziwa. Le milinganiselo yombono womntu.
Ukuqinisekisa ukuxilongwa kwe-retinitis pigmentosa, i-ophthalmologist ingenza i-electroretinogram (ERG). Ngexesha lovavanyo, ukukhanya kwemibala eyahlukeneyo kunye nokuqina kuyakhanya kwiso lakho njengoko ujonge kumhlaba omkhulu obonakalisayo. Iilensi zonxibelelwano eziqulethe i-electrode zibekwe kwiliso lakho. Ucingo ludlulisa irekhodi lomsebenzi we-retina. I-ERG idala iphepha lokujonga iimpembelelo zombane. Abantu abane-RP banemisebenzi yombane esezantsi kunesiqhelo kwiretina yabo.
RP rhoqo kukuphazamiseka kwilifa.
Oogqirha abenza uvavanyo lwamehlo banokubona imiqondiso yokuqala ye-RP kwasekuqaleni kweminyaka ye-10. Iimpawu zihlala ziqala ebusheni okanye ebudaleni. Bacotha kancinci ekuhambeni kwexesha.
Ubukhulu besifo buyahluka kuye ngomntu. Nangona kunjalo, ukungahambi kakuhle kunye nokulahleka kokubonakalayo kuhlala kubomi bonke.
Ngenxa yokuba i-RP kukuphazamiseka kwemfuza, akukho ndlela yakukuthintela oko. Akukho ndlela iqinisekisiweyo yokuthintela okanye yokulibazisa ukulahleka kombono okuhambelana noko.
Akukho lonyango lwaziwayo lwe-RP.
Ixabiso le percocet 5/325
Olunye uphando lubonisa ukuba iidosi eziphezulu zevithamini A (15,000 IU / ngosuku) zinokucothisa ukonakala kancinci kwabanye abantu. Nangona kunjalo, ubungqina boku abunamandla. Ukongeza, kunokubakho iziphumo ezinetyhefu yokuthatha ivithamin A.
Ukuba unayo i-RP kwaye ufuna ukuzama unyango lwe-vitamin A, thetha nogqirha wakho kuqala. Buza malunga nokhuseleko kunye nexabiso elinokubakho lonyango.
Ezinye izigulana ezine-RP ziphuhlisa i-macular edema. Ukuqokelelwa kolwelo kumbindi wamehlo kunokukhawulezisa ukulahleka kombono. Oku kunokunyangwa nge-carbonic anhydrase inhibitor kwifomu yomlomo okanye njengamathontsi wamehlo. Isiyobisi esisetyenziswa ngokuqhelekileyo yi-acetazolamide.
iivith d 50000 iu d2
Nini ukubiza iNgcali
Jonga umsebenzi wakho wokhathalelo lwempilo ukuba ubona naluphi na utshintsho kumbono wakho. Oku kubandakanya ukunciphisa ukubanakho ukubona ebusuku okanye ukulahleka kombono womda.
RP ayinakunyangeka. Ilahleko ebonakalayo iyaqhubeka kwaye isigxina.
Isixa kunye nesantya sokonakala kuyahluka ngokwamntu. Ke ngoko, ubungakanani bokulahleka kombono akunakuqikelelwa.
Izigulana ezininzi ezinengxaki yale meko zikhokelela kubomi obuqhelekileyo.
IAmerican Academy yeOphthalmology
IZiko leLiso leSizwe
Ukutsala okuPhucukileyo kwePaleo Fitness: I-L-Sit Pull-Up / Chin-Up
J 92 (Amlodipine Besylate, Hydrochlorothiazide kunye neValsartan 10 mg / 25 mg / 320 mg)
Uyenza njani i-Snowflake yePhepha eliSibhozo
Indlela yokuLima izilwanyana kwiMinecraft
I-7 6 (Amphetamine kunye neDextroamphetamine 10 mg)
Uyisebenzisa njani iitoni zeChromatic ukuze udlale iBass Guitar
Obag Nu-Derm Cacisa
Uhlaziya njani iXcode ngokuKhutshwa kweSwift eNtsha
I-OMEPRAZOLE 40 mg R645 (i-Omeprazole ilibazisekile-ikhupha i-40 mg)
Idosi yeTylenol yeminyaka eli-10 ubudala
l-tryptophan iziphumo ebezingalindelekanga
amayeza okuphazamiseka kunye nokucaphuka
yintoni eyenziwa yi-phenobarbital
ukuthatha i-adderall okokuqala
isetyenziselwa ntoni i-terramycin